Ugu Weyn Ee Apple Spartan
Apple Spartan. Sharaxaada kala duwan. Talooyinka daryeelka iyo soo dejinta
Dhammaanteen waxaynu maqalnay nooca tufaaxa ah sida Macintosh. Kala duwanaanta noocaas ah ayaa doorbidi kara jilayaasha si ay ugu saleysan tahay helitaanka noocyo cusub oo tufaax ah. Spartan, oo aan ka hadli doono maanta, sidoo kale waa nooc ka mid ah. Qeybaha kale ee loo doortay in laga gudbo waxay ahayd Yellow Newtown - sidoo kale ma yar yar loo yaqaan bannaanka u.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Apple Spartan 2020